Ngamunye wethu ngezikhathi evuka isifiso ukudala, ukwakha ubuhle. Technique iphuzu-to-phuzu, noma iphuzu Ngesineke, amakhosi imfundamakhwela kungaba mnandi futhi kulula, ngoba ayidingi amakhono athile ukuze upende. Ngokuba ukuthuthukiswa iphuzu-to-phuzu ubuchwepheshe okudingeka usebenzele nokusebenzisa amachashazi ezifanayo letingemasayizi lahlukene.
Spot Umdwebo Starter limelela art isicelo amaphuzu kuyiphi imigca iye etulu iphethini, nomhlobiso noma isithombe indaba.
Ukukwenza umkhuba amachashazi ungakwazi ukuhlobisa yezandla, izinto eziyizikhumbuzo, izesekeli, ubucwebe, ekhaya impahla kanye ngaphezulu. Kwakucatshangwa ukuthi ungakwazi ukupenda usebenzisa ibhulashi emihle noma likayinki elidala, kodwa, ngokuyisisekelo, ezivamile wabuka iphuzu ngesineke, Wabasaqalayo, le ndlela - elula kunazo. Ukusebenzisa wesifunda ine umphumela amachashazi ephakanyiswe ezibukeka ngempumelelo.
Figure kumele zibukeke, emkhatsini wetincenye teluhlaka lephethini udinga ukulandela elifanayo, yingakho kuba kulula ukusebenzisa imibala akhethekile, wabuka. Upende tube is uvikelwe iphele ukuphuma, ngoba ngokusebenzisa ngokwanele kancane ngawakhamela tube kanye tip has ingxenye encane, okuvumela ukuba alawule ukubaluleka amaphuzu. Ngokusho izimpendulo Needle abesifazane, okungcono izifunda ezibhekwa "Decola", "umqondo", "Gamma", "Tair", okuyinto angathengwa at ezitolo yobuciko kanye yezandla, kanye oda ezitolo angaphandle.
Spot Umdwebo Wabasaqalayo kwenziwa kusetshenziswa ama-stencil akhethekile izifanekiso ukuthi ufakwe ngaphansi into ingilazi senzelwe imidwebo. Uma uhlele ingilazi yewayini noma vase kungenziwa agibele amahhashi ngaphakathi uhlaka besikhundla iphethini tape. Le ndlela ivumela ukuzwakala okukhiwa kwenziwa.
Lapho zokuhlobisa isitsha sezimbali esetshenziswa umdwebo dot. Izithombe umkhiqizo osuphelile kanye izigaba umdvwebo, bheka ngezansi.
Ingaphezulu umkhiqizo kufanele degreased nge acetone noma uphuzo oludakayo ukuze uthole eliphezulu isithombe. Uma into opaque, wasisebenzisa eziyisisekelo umbala ithoni acrylic upende. Lapho usebenzisa iphethini kumele ngezikhathi zihlanzwe eyomile indwangu itjhubhu wesifunda, kulesi simo, amaphuzu kuyoba sobala xaxa futhi abushelelezi. Ukuze ugweme kumiswa izigaxa ekhaleni bahlanza ithiphu pin noma iphepha clip.
Ready umdwebo omisiwe ke camera nge ukuvenisha esobala. Ukunikezela amakhosi ukumelana iphethini ukuncoma ukumelana ingilazi izibuko kuhhavini ezingeni lokushisa 150-170 ° C imizuzu 30.
Ngokukhethekile ngokushesha isikhumbuzo yewayini ukupenda Amaphetheni arareneko, indawo Umdwebo Wabasaqalayo kungase kungagcini izakhi okulula umbala owodwa noma emibili, ukukhishwa letawuba okuhlangenwe nakho okulusizo nokusiza ukuthola isandla. Esikhathini esizayo, isipiliyoni isicelo lwamaphethini ezahlukene kuyokusiza ukuba enze umsebenzi eziyinkimbinkimbi.
Abanye abaculi abonise art yabo ukudayiswa, futhi abe imali ekahle, njengoba umlobi we umsebenzi kwenziwe ngekhono ngenxa, ayengeve baziswa.
Monochrome umbala. Imithetho inhlanganisela yemibala amazinga kahulumeni ahlukahlukene ekuphileni.
Noma imuphi umculi ecabanga: ukuthi ungasondela kunoma iyiphi ndaba?
Kamil Koro - inkathi zesikhashana e Umdwebo (kusuka okudala kuya kokusha)
Myasoedov Grigoriy Grigorevich: Biography, izithombe
Manicure Okungajwayelekile - Kufaka fantasy!
I iholide engcono - iholide eTurkey ngo-May
Ukukhetha zokupheka umhluzi
Rhodes "Kiss wezilwandle ezimbili". Greece
Original isipho uthisha ngezandla zakhe ku lokuzalwa kwengane, usuku isisebenzi pre-school, ngesikhathi iziqu enkulisa (isithombe)
Decoupage Christmas amathoyizi ngezandla zabo - imishini nemibono
Yokusetshenziswa, i-analog "Valvira". Izibuyekezo "Valvira"